​Sacad "Somaliland ma aqoonsana maamulka kale oo ka jira dhulkan"
HARGAYSA, Somaliland- Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Dr Sacad Cali Shire, ayaa ka hadlay wadahadallo u dhaxeeya iyaga iyo maamulka Khaatumo kadib shirar is daba jooga oo ay muddooyinkii dambe labada dhinac yeelanayeen.
Shire, oo warbaahinta hadal kooban siiyay, ayaa xusay in kulankoodu si wanaagsan ugu bilowday islamarkaana ugu soo gaba gaboobay isagoo tilmaamay isagoo intaas ku daray inay isku afgarteen sidii loo sii amba qaadi lahaa howlaha socda.
Wuxuu sheegay inay iyaga iyo Khaatumo isku waafaqeen sidii looga fogaan lahaa islamarkaan meel looga soo jeedsan lahaa gacan saddexaad oo arrimahooda soo dhexgasha.
Isagoo sii hadlaya, wuxuu meesha ka saaray inay jiraan maamul kale oo ka arrimiya deegaanada Somaliland isagoo maamulka Khaatumo ku darayay inuu hoo yimaado xukuumadda Hargaysa.
"Somaliland hal dowlad baa ka jirta, anaga ma ictiraafsanin maamul kale oo dalkan ka jira, balse waxaa jira khilaaf siyaasadeed oo Somaliland dhexdeeda ka jira..,"Ayuu yiri Sacad Cali Shire.
Wuxuu sidoo kale sheegay inay ka wadahadleen xubnaha ka socday Khaatumo in amniga ay ka wada shaqeeyaan, hormarka iyo danta Somaliland.
Sacad Cali Shire, ayaa dhinaca kale xaqiijiyey in qodobada lagu heshiiyey ay tahay in arrimaha horumarinta iyo deeqaha deegaanada Khaatumo sheegato ee Sool, Sanaag iyo Cayn loo soomariyo dhinaca Somaliland.
Waxaa xusid mudan in goobahaasi wada sheegtaan Somaliland, Puntland iyo Khatuumo iyadoona beesha caalamka ay u aqoonsatay dhul lagu muransanyahay.
Wadahadalkan oo ka qabsoomay dalka iyo waddanka Ethiopia ayaa muuqda in Somaliland u wajahday qaab inay la hadlayso koox ka goosatay maamulkeeda, halka Madaxweynaha Khaatumo uu sheegay in loo wajahayo qaab maamul.
Majirto ilaa hadda cid si rasmi ah u aqoonsatay maamulka Khaatumo oo gacanta ku hayaa deegaano kooban halka inta kale ay maamulaan Somaliland iyo Puntland.
​Duub-dhaqameed ka horyimid heshiis dhexmaray Khaatumo iyo Somaliland
LAASCAANO, Somalia- Dubabka dhaqanka beelaha dega gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa ka horyimid wadahadalka iyo hishiiska dhexmaray maamullada Khaatumo iyo Somaliland.
Madax-dhaqameedkan oo maalmihii la soo dhaafay shir uga socdey tuulo lagu magacaabo Cadcad ...